NGAPHANTSI KOKUGQUMA UBUSHUSHU (IINKONZO NEENGOZI) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Ngaphantsi Kokugquma Ubushushu (Iinkonzo neengozi)
Nasi isikhokelo sethu kumgangatho ongaphantsi kwesilingi kunye neengozi kunye neentlobo ngeentlobo ezithandwayo ezinje ngeglasi yefayibha, igwebu lokutshiza, uboya bamatye kunye nebhodi yegwebu. Ukuba nesambatho esigqibeleleyo sophahla lwangaphantsi akupheleli nje ekunciphiseni iindleko zamandla akho kodwa ikwabonelela ngendlu esempilweni kwaye etofotofo kusapho lwakho. Ngaphaya koko, ukwanceda imeko yendalo ngokunciphisa amandla amdaka.
Nangona kunjalo, umceli mngeni wokuqhuba ngokufaka iintambo, umsebenzi wendlela, kunye nezinye izinto zokwakha kunye neendleko ezongeziweyo zinokubabeka ngaphandle abaninimzi abaninzi ngaphambili kolo tyalo mali.
Eli nqaku liza kukunceda ukuba uvavanye ukufakwa kwe-plailing yakho engaphantsi komhlaba ngokwazi ukuqwalaselwa, i-pros kunye ne-cons, kunye neengcebiso malunga nokufakwa kwe-plailing engaphantsi.
Yintoni onokuyisebenzisela ukuGqumeka kwePhahla elingaphantsi
Ngaba Ufanele Ugqume Isilingi?
Yongeza Ukuqwalaselwa Kwesilingi
Isiseko sokuPhela kwePhahla kunye neNgxaki
Iindidi zoGcino lwePhahla elingaphantsi
I-Fiberglass insulation Pros kunye ne-Cons
Ilitye loKwazisa lokuVala iiNzuzo kunye neNgxaki
Uhlobo lweeNkcenkceshelo zoLondolozo kunye neNgxelo
Iinzuzo zeBhodi yokuGqibela iBhodi kunye neengozi zayo
Ukujongana nokuchasana okungagungqiyo
Xa kuthelekiswa nezinye iindlela zokuphucula ukusebenza kwamandla akho, ukufakelwa kwesilingi engaphantsi yenye yezona zinto zilula unokuzenza.
Ukufakwa kwe-plail efakwe kakuhle kwigumbi lakho elingaphantsi kufuneka kuzise intuthuzelo kunye nempilo kubahlali bakho abahlala ngaloo ndlela bephucula umgangatho wokuphila. Ezi zibonelelo zibaluleke kakhulu xa kufikwa ngaphakathi kwekhaya lakho.
Ezona zinto zithandwayo zokugquma ukogquma uphahla zibandakanya i-fiberglass, ibhodi ye-foam, kunye nebhodi yokutshiza apho nganye inezibonelelo zayo kunye nezinto ezingalunganga.
Njengoko ezi zinto zithethiweyo zibalasele ngokugqibeleleyo, kuya kufuneka uqonde nangona kungenakwenzeka ukufezekisa i-100% yokugquma
Iimeko ezintathu eziphambili zenza ukuba ukufakelwa kwigumbi elingaphantsi komhlaba kubalulekile. Okokuqala, ukuba igumbi lakho elingaphantsi aligqitywanga, okwesibini ukuba ufuna ukukhusela isiseko sakho kwigumbi elingaphantsi, kwaye okwesithathu ukuba unommiselo wendawo malunga nokufakelwa kwesilingi engaphantsi.
Ukugquma isilingi yakho engaphantsi kuya kuthi kuthintele iingxaki zokufuma kwixesha elizayo, ukubonakaliswa kwezinambuzane, ukungena kwe-radon okuyirhasi eyityhefu kunye nomhlaza.
Njengoko izibonelelo zokufakwa kuphahla lwangaphantsi zingenakuphikwa, ingcinga yokufaka ishell kwimali eyongezelelweyo kunye nokwenza umsebenzi owongezelelekileyo wokufakwa kuphahla lwangaphantsi iyababeka abanini khaya ekwenzeni le projekthi.
1 Indawo engaphantsi engagqitywanga.
Ixabisa malini umtshato wokuya
2 Iimfuno zokuthintela isandi.
Imimiselo emi-3 yeNgingqi efana neemfuno ze-IECC.
Esinye isizathu esivakalayo sokwenza ukufakwa kwesilingi kumgangatho wokugcina amandla owenzayo ekuhambeni kwexesha anokunceda imeko-bume.
Ngokwe-EPA ikhaya eliqhelekileyo elinokugquma kakuhle kwiindawo zalo zokurhubuluza nakwigumbi elingaphantsi linokugcina umninikhaya ejikeleze i-200 yeedola ngonyaka okanye i-15% isuswe kwiindleko zokufudumeza nokupholisa. Akuninzi kokuphela komninikhaya kodwa i-25% ukuya kwi-30% yokunciphisa ukusetyenziswa kwamandla kunokunceda ukunciphisa ukukhutshwa kwegesi yokushisa.
Ukwakha ezona Ndlela ziBalaseleyo eMelika Uthotho lukwadwelisa le miqathango ilandelayo yokugquma isilingi.
Ikhaya lakho likwimozulu eyomileyo.
Uyabona ukuba akukho kufuma kwigumbi lakho elingaphantsi.
Awusebenzisi igumbi lakho elingaphantsi njengendawo yokuhlala.
Kananjalo la manyathelo afanele ukwenziwa ngaphambi kokuqala kweprojekthi yokugquma:
Jonga umoya owaneleyo kwigumbi lakho elingaphantsi.
Naliphi na i-knob-and-tube wiring kwi-plailing yakho yangaphantsi kufuneka ithathelwe indawo njengokuba i-insulation ingagqithisa i-wiring.
Imibhobho kunye nemibhobho kwigumbi lakho elingaphantsi kufuneka ifakwe igqunyiwe ukuthintela ukubanda kunye nelahleko yobushushu.
Ukuphucula amanqanaba obushushu. Ngokomgaqo, ukugquma okuhle kwigumbi lakho elingaphantsi akuyi kuvumela umoya oshushu ukusuka kumgangatho wakho ophezulu ukuya kwigumbi lakho elingaphantsi ngexesha leenyanga ezibandayo ezinciphisa ilahleko yobushushu.
Kuba igumbi lakho elingaphantsi liqhele ukubanda ngaphezulu kwama-20 ukuya kuma-30 degrees kunaleyo yokuhlala kwakho, ubushushu buya kusingqongileyo ngenxa yokuba umahluko wobushushu.
Nciphisa iindleko zokufudumeza. Njengoko unako ukulawula ubushushu bakho kwiindawo zakho zokuhlala ngasentla, awudingi amandla ongezelelweyo ukumelana nelahleko yobushushu ukuze uphucule inqanaba lokuthuthuzela elingaphakathi.
Isithintelo sesandi esisebenzayo. Xa ucwangcisa ukusebenzisa igumbi lakho elingaphantsi njengendawo yokuzivocavoca, igumbi lomdlalo, okanye nawuphina umsebenzi ovelisa ingxolo ebalulekileyo, ukufakelwa kwesilingi engaphantsi kuyasebenza ekugcineni ingxolo phantsi ukuba ayithethi izandi ezingafunekiyo kwindawo yakho yokuhlala.
Uthintela uthuli kunye nezinye izinto ezaliwa ngumzimba. Kwigumbi elingaphantsi elisetyenziswa njengendawo yokusebenzela okanye indawo yokugcina, kunye nokugquma kwisilingi kuya kuyinceda.
Apha siphula izinto ezilungileyo nezingalunganga zeentlobo ezithandwayo zokugquma isilingi.
I-fiberglass yinto ethandwa kakhulu yokugquma amakhaya enziwe ngokukodwa kwiglasi yokuphinda yenziwe kwakhona ebizwa ngokuba yi-cullet. Banokuza kwiibhetshi, iingubo, okanye iiRolls kunye ne-blow-in in openfill apho iibhetts zezona zilula ukuzifaka kwimingxunya ngenxa yobungakanani obusikiweyo ngaphambili.
Icala elisezantsi nangona izithuba zinokubonakala ngakumbi zisenza kube nzima ukufikelela kwisithintelo esipheleleyo.
Ngokubanzi yinto efanelekileyo yokugquma amakhaya.
Ubungakanani bokusikwa kwangaphambili kuthetha ukuba ukufakwa kunokuba yiprojekthi ye-DIY yabanini bamakhaya.
Iphucula ukusebenza kwezixhobo ze-HVAC
Izinto ezifanelekileyo ezingenasandi
Ifumaneka ngokulula kwimarike
Kuba ayinamanzi inokufunxa amanzi ngokulula kunye nokufuma okunokunciphisa iipropathi zayo zokugquma.
Ungatshisa ngokulula ngakumbi ngezinto ezijonge iphepha.
Ngenxa yokuba incinci kakhulu inokuntywila ishiye isilingi sakho esiya kufuna ukutya kunye neengcingo ukuze zikhuseleke.
Uboya belitye bunoxinano oluphezulu kunye nolwalathiso lwefayibha olungacacisi olwenza ukuba ibe sesinye sezona zixhobo zibalaseleyo zokugquma kwisandi-sokuvavanywa kwakhona. Ubunini bepropathi yentsimbi yokugquma uboya kuthetha ukuba ayizukuwa ngokulula njengeglass fiberglass.
Kwiindawo ezifuna ukuthintela isandi, le yinto yokuya.
Iyawakhaba amanzi. Zilungile kwiindawo ezinomswakama ophezulu ngenxa yokukwazi ukuphinda ugxothe amanzi.
Ukukhusela i-Thermal kuqinisekiswe kakhulu.
Kubiza kakhulu kune-fiberglass ngenxa yokungabikho kwezinto eziqhelekileyo.
Inzima kune fiberglass. Kungaba yinkathazo ukufaka okanye ukusika kubungakanani obufunayo.
Ukuba yenye indlela ye-asbestos, isenokubangela umhlaza ngokwe-EPA. Kodwa i-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando ngomhlaza (IARC) ikwahlula oku, kunye noboya beglasi, kunye noboya be-slag ukuze bungabi yi-carcinogenic ebantwini. Uluvo ngalo mbandela lohlulwe. Ukuba ulumkile, mhlawumbi kungcono ukuba uhlale kude nale nto kwaye ujonge ezinye iindlela.
Ukutshiza ukutshiza kuvela kwi-polyurethane kwaye kuyabiza kodwa kuyasebenza kakhulu.
Kulula ukufaka isicelo. Kuba ikwimo engamanzi, inokutshizwa ngaphezulu. Iindawo ezinemisebenzi emininzi zinokugcwaliswa ngokulula lulwelo.
Ukufakwa kwe-Thermal kugqwesile. Xa isetyenziswe ngobuchule, imathiriyeli inokunceda ukugcina ubushushu butshixelwe ngaphakathi endlwini, ukugcina abathengi kumatyala abo amandla.
Izinto ezilula. Izinto eziphathekayo azibeki uxinzelelo olukhulu kwisakhiwo.
Ayivelisi i-allergen njengothuli okanye iigesi ezinobungozi ezinokuchaphazela abantu okanye izilwanyana.
Isithintelo ekungeneni nale nto siphezulu kakhulu ngokwexabiso. Yimveliso yeprimiyamu yabantu abanemali eyaneleyo yokuhlawula ukuze kungabikho wonke umntu onokukwazi ukuhlawula oku ngenxa yoko kuya kufuneka bakhethe ezinye iindlela.
Umsebenzi oqeqeshiweyo kufuneka aqeshwe ukutshiza le nto, ngakumbi kwiindawo ezijikeleze i-bracing, iintambo zombane kunye nemibhobho. Ezi zinto akufuneki zitshizwe ukuze zilungiswe okanye zitshintshwe kwixa elizayo.
Ukufakwa kweBhodi enegwebu yinto ekhoyo ngoku. Abantu be-DIY banokuzifaka ngokulula njengesisombululo esikhawulezayo kuyo nayiphi na imiba yokugquma. Zininzi iintlobo onokukhetha kuzo njenge-Expanded Polystyrene (EPS), iPolystyrene ekhutshiweyo, kunye nePolyiso (Polyisocyanurate).
Kulula ukusika kwimilo oyifunayo. Sebenzisa isarha ejikeleziweyo enebala lokwakha okanye imela yokusetyenziswa ngokufumana amanqaku.
Zilungele indawo ezinje ngesiseko sangaphandle, ngaphakathi ngaphakathi, okanye phantsi kwesongelo sendlu.
Kubiza kakhulu kunokuba i-batt insulation kwaye kufuneka ithathelwe ingqalelo kuphela xa ukufuma kungumba okanye kulindeleke ukuba ube ngumcimbi.
Ukugcina ubushushu ngaphakathi ekhayeni ayisiyiyo kuphela into ekufuneka ukhathazeke ngayo xa uzama ukufaka ubushushu, ukufuma yinto ekufuneka kujongwene nayo.
Xa kushiywe kungakhange kuhlolwe, ukufuma kunokwakheka ngaphakathi kwinto yokwambathisa (kuxhomekeke kuhlobo) kwaye kunokubangela zonke iintlobo zomonakalo. Ukubumba, ukubola, kunye nokonakaliswa nje kwezinto ngokubanzi kunokwenzeka konke kumonakalo wokufuma. Isisombululo koku kukusebenzisa ubushushu.
Ngumaleko weplastiki okanye iphepha elihamba nezinto zokwambathisa ukuze lisebenze njengesithintelo kumphunga wamanzi. Kwiindawo ezinobumanzi obuphezulu, le yinto efanelekileyo yokuthintela lo monakalo.
Onke amacandelo amava asekhaya afumana iqondo elithile leengxaki zokufuma. Ezinye iindawo zinamava amabi. Izikhombisi ezinjengokwakha ukufuma okanye ukukhula kwesikhunta luphawu oluqinisekileyo lokuba kufuneka uqwalasele ukugquma kobuso.
Ukungafakwanga luhlobo lokhuselo olufakelweyo xa sele kukho izinto zokwambathisa ezikhoyo. Kuba ayikhuselekanga, ibiza ixabiso eliphantsi. Ke kufuneka uyiqwalasele nini le nto? Xa unemicimbi yengxolo efana nomgangatho we-creaking, ke jonga olu khetho, ukuba awunayo imicimbi yokufuma.
Indawo yoThintelo yoThintelo loThintelo
Ukufumana izinto ezifanelekileyo oza kuzisebenzisa njenge-insulator kunokuba ngumsebenzi onzima, xa ucinga iindleko, ixesha, indawo, njl njl. Ukufumana abantu abafanelekileyo ukuba bakuncede ekuthatheni isigqibo kuhlala kulinyathelo lokuqala.
Iingcali ezinamava zinokuvavanya indawo yeprojekthi kwaye zichonge elona khondo lilungileyo lokwenza. Iinkcukacha njengokukhetha i-R-Ixabiso elifanelekileyo kunye nokuba uzisebenzisa phi zizinto ezinokuthi zifundwe ziingcali.
Ukuba ujonge ukufaka ubushushu okanye ukuzama ukulungisa esele ikho, ungathandabuzi abantu abafanelekileyo ukuba benze lo msebenzi.
Zonke iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide ezibandakanya wonke ubani kwiCaribbean honeymoon
utshintsho kwigama elisemthethweni ecalifornia
izipho zekrisimesi ezizodwa kuye
iilokhwe zontombi eluhlaza okwesibhakabhaka nesilivere